Xildhibaan Fowziyo Yuusuf “Nidaamka doorasho ee uu guddiga keenay Baarlamaanka waxaa uu horseedi karaa dagaal” – Kalfadhi
December 8, 2019 Hassan Istiila
Xildhibaanada Golaha Shacabka BJFS ayaa maalintii 2aad dood ka yeeshay Sharciga Doorashooyinka Qaranka.
Kulanka 17-aad ee Golaha Shacabka oo uu shalay Guddoominayay Guddoomiyaha Golaha Shacabka Mudane Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan uuna goob-joog ahaa Guddoomiye ku-xigeenka 1-aad ee Golaha Shacabka Mudane Cabdiwali ibraahim Sh.muudeey, ayay Xildhibaanada ku cabirayn aragtidooda la xiriirta Sharciga Doorashooyinka Qaranka.
Xildhibaanada Golaha ayaa intooda badan Guddiga KMG ee soo diyaariyay Sharciga Doorashooyinka kaga mahadceliyay sida Sharciga ay u waafajiyeen Dastuurka Qaranka. Balse waxaa jira xildhibaanno kale oo doodo sharciyeed ka keenay nidaamka, kaas oo ay shegeen in uu qala-laaso uu u horseedi karo dalka Soomaaliya.
“Guddiga doorashooyinka 2015-kii bishii labaad ayaa la ansixiyay tan iyo xiligaasi waxaa ay noosoo diyaariyeen nidaamka xiran iyo kan isku dheeli-tiran. Nidaamkaasi oo loogu talagalay dowladda dhibaatadu ay gaartay ee bur-burtay. 12-ka nooc ee doorasho ee caalamka ka dhaca nooc nagu haboon ayuu ahaa sababtoo ah waa in la isku soo dhoweyaa dadka dagaallamay si ay aaraah ugu heshiyaan”, ayey tiri xildhibaan Fowsiya Yuusuf Aadan.
Xisbiyadda, doodo adag ayey ka galeen nidaamkaasi ilaa dibadda ayaa la geeyay, ayey hadalkeeda sii raacisay.
Blasé guddiga waxaa ay keneen nidaam ka duwan midkaasi oo ah cidii hormarta ayaa heleysa, nidaamkaasina ma lahan wado loo raaco, taasina waxaa ay keeni kartaa dagaal iyo in cid walba ay qori qaadato, ayey tiri.
Xildhibaan Siraaji “Gor-gortan lagama geli karo in la bixiyo xuquuqdii ay lahaayeen ciidanka, shaqaallaha iyo xildhibaannadii Baarlamaankii 9-aad”